September 20, 2021 Xuseen 5
Wararkii ugu dambeeyey ee aannu ka helayno Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in Wakiilada Beesha Caalamka ee ku sugan Xerada Xalane ay cadaadis xoogan saarayaan Madaxda is khilaafsan ee dowladda, iyaga oo ka dalbanayay inay wax walba wada-hadal ku dhameeyaan.
Xogta ayaa sheegaysa in saaxiibada Soomaaliya ay u soo jeediyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay joojiyaan qoraalada sii hurinaya qoraalkooda, si uusan u sii xoogeysay.
Beesha calamka waxa layirahdo
Majiraan tusaale adùunku
Wadankasta asagaa xor uah
Dalkiisa laakìin waxaa jiro
Wadamo sida mafiyada ushaqeeyo oo aduunka dhaco
Tusaale shaqaalaha somalia waa
50.000 oo aay kujiraan cidamada xooga dalka mushar
Ayay qaataan 5,sano iyo 8bilood lacagtaas
Màali makadaahin,hayeeshee waxa
Besha calamka aad kuhaysaan
Waa kuwii lacagahaas dhicijiray ,xasan sh maxamud
Askarta ayuu ku yiri 100$
Ninkii aan rabin haiska tago
Been mahan meelkasta ayay
Kujirtaa ninkii ciidan ah ee
Malitaas nolaa miyuu yalikaraa 500$ maanta qaadanaayo
Xasan iyo xulufadisa hasonoqdèno hadaba beel calam
Majirto èe tuugo ayaa jirto
Waa maxay mauqiifka Beesha caalamka. Ma xaqa iyo cadaalada ay umada somaaliyeed rabto ayey rabaan in ay indhasarceeyaan. Arinku alamtara ayuu soo dhaafay oo kuma eka farmaajo iyo roble. Umada somaaliyeed ayaa cadaalad raadinaysa oo waxay rabaan in xaqa loo hiiliyo oo cadaalada la hor keeno dulmiileyaasha dooxata ah ee ikraan tahaliil iyo kuwii ka horeeyey Dooxatay. Wakhtigii umada somaliyeed lagu bajin jirey shabaab iyo doorasho ayaa khalkhal galeysa waa la mooday. Maanta somali waxay rabaan dhiig dulmiile oo ay cabaan. Cidii is hortagta rabitaanka cadaaladeed ee umada somaaliyeed raadinayso ayadaa kala kulmin wajiqabax iyo ixtiraam la’aan. Waxaan kula talin in saaxibada caalamka ee somaaliyeed ay la saftaan rabitaanka iyo cadaalada ay umada somaaliyeed raadinayso. “Beesha caalamku” ma waxay garan waayeen waxa ay garowsadeen shabaab. Shabaab gacmaha ayeey ka dhaqdeen dilkaan waayo maysan Rabin in ay la Hardamaan hirarka xoogeystey ee umada somaaliyeed ee ku saleysan cadaal raadiska.
Waxaan kaloo kula talin pubtland in ay joojiso shirka loo balansanyahay in lagu qabto Garoowe. Waxuu shirkaasu sababi karaa in xaley Dhaley laga noqdo dulmiyadii ka dhacay xamar oo ay dulmileeyaashu halkaas ku helaan mus ay uga xaluushaan cadaalada.
Somalina waxaa kula talin in ay cadaalada u hiiliyaan ayagoo eegin qabiil ama siyaasad ama gayi dagaan, waayo, dulmigii walaalkaa maanta la kulmay adna bari ayuu kugu habsan. Nabsigu ma sal dhigto ee hadba meel buu ku hoy bariistaa. Hadii aan dulmiga laga dhidhiyin waxaa la gaarin wakhti ay somaaliya noqoto sida kenya oo habeen madoow hadba muwaadin hoy-giisa lagala baxo oo iL dambe la saarin.